Maka: ukubeka iliso kwezentlalo
Ukuzibandakanya kunye nokuKhula kwe-CRM yeNtlalo
NgoMvulo, Novemba 19, 2012 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu I-CRM yeNtlalontle yenye yala magama athambekele ekusetyenzisweni kakhulu kwaye adideke. Kubonakala ngathi yonke inkampani enazo naziphi na izinto zentlalontle sele iqale ukwahlula usetyenziso lwazo kwindawo yeCRM yoLuntu. Ngokoluvo lwam, kukho izinto ezininzi ekufuneka iqonga lezentlalo libe nalo ngaphambi kokuba lizibize njengeCRM yeNtlalontle: Ukubeka iliso-ukukwazi ukubeka esweni intlalo ngexesha langempela kunye nokuseta izilumkiso. Ukuchonga-ukubanakho ukufaka ifayile ye-
Uhlalutyo loMthengi kuShishino, uLwazi ngoLuntu kunye neMpendulo
NgoLwesibini, Juni 12, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Kwilizwe lanamhlanje lentlalontle, ukudibanisa oko kuthethwa ngumthengi kubaluleke kakhulu kwiimveliso. Ubungqongqo bunokuba sisixhobo esiluncedo kule meko. Isixhobo sokujonga isicatshulwa sesicatshulwa esikhupha iinyani, ubudlelwane, kunye neemvakalelo ezivela kwi-labyrinth yeempendulo ezifunyenwe ngokunxulumene, yithi iphulo lokwazisa, i-tweet, uhlaziyo lwe-Facebook, iposti yebhlog, iimpendulo zovavanyo-ewe, uya kukhukuliseka! Injini yokutsala isebenzisa imeko yendalo evavanyiweyo kwimigaqo yeelwimi kunye
Iindlela ezintathu ezilula zokuqala ukubeka iliso kwi-intanethi kwi-intanethi
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 22, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMichael Reynolds
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukuba ubusoloko ulandela iindlela zosasazo lwasentlalweni konke konke, ngekhe uve okuninzi malunga nokujoyina "incoko" kunye nendlela yokuthatha inxaxheba. Usenokuba usivile isilumkiso: "abantu bathetha ngenkampani yakho nokuba ukhona okanye awukho". Oku kuyinyani kwaye sisizathu esikhulu sokutsiba kwimithombo yeendaba kwaye uqale ukuthatha inxaxheba. Ukuba uyinxalenye yencoko, ungaphendula imibuzo, wenze umonakalo, kwaye
Edlulileyo 1 2 3
URavi Chalaka: Ukuhambisa ukuThengisa kunye nokuThengisa kwiiNkomfa eziQinisekileyo kunye neentlanganiso
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noRavi Chalaka, igosa eliyintloko lentengiso kunye ne-VP yentengiso yemveliso eJifflenow, kwiQonga lokuZenzekelayo leNtlanganiso. Njengoko iinkampani ziye zarhoxisa iintlanganiso zabo kunye neenkomfa, kwaye bathutha amaqela abo okuthengisa kunye nawokuthengisa ukuba basebenze ekhaya, kuye kwafuneka boyise imiceli mngeni emininzi. Ukusuka ekunxibelelaneni ngevidiyo…
UKatie Mares: Iibhanti zingamamela njani kwaye ziphendule kwabona baThengi banempembelelo ... Abasetyhini
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noKatie Mares, umbhali we Ukufumana ishishini lakhe: Ukubaluleka kokuLungelelanisa amava akho eBrand kuMthengi wabasetyhini. Nangona intshukumo yabasetyhini inxibelelene kwihlabathi lethu lentlalontle kwaye abantu bashumayela amandla amantombazana, uKatie ubonile ukuba le ngqondo ayikangenanga kuphawu lweshishini okanye amava oshishino…
I-Torchlite: Indawo yokuThengisela amaShishini amaNcinci okuThengisa iiSpecial "Flexperts"
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, senza udliwanondlebe noSusan Marshall, umseki kunye ne-CEO yeTorchlite. USusan wabelana ngobuhlakani bombutho kwaye ujolise ekuxhaseni amashishini amancinci ngokuphunyezwa kunye nokuxhaswa kweeNtengiso. I-Salesforce Essentials yi-CRM eyilelwe ngokukodwa amashishini amancinci avela kwi-Salesforce. Kwindlela yokwenene yokuthengisa, iqonga linokwenziwa ukuba…
Ubumfihlo kunye neeKuki: Le ndawo isebenzisa ii-cookies. Ngokuqhubeka nokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukusebenzisa kwabo.
I-PHP kunye ne-SQL: Bala okanye ubuze umgama phakathi kweNqaku leLatitude kunye ne-Longitude
Zintoni iiWebhu eziMnyama, iWebhu enzulu, kunye nomhlaba ongaphezulu / ocacileyo wewebhu?
Asisoloko sixoxa ngokhuseleko kwi-Intanethi okanye kwiWebhu emnyama. Ngelixa iinkampani zenza umsebenzi olungileyo wokukhusela ngaphakathi ...
Qinisekisa uLuhlu lwakho lweNtengiso ye-imeyile: Kutheni, njani, kwaye phi
Uvavanya njani kwaye ufumane ezona nkonzo zokuqinisekisa nge-imeyile kwiwebhu. Nalu uluhlu oluneenkcukacha lwababoneleli njenge ...
Ukuthengisa nge-imeyile kunye nokuThengisa nge-imeyile